ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၈)
ပီတာကျော်ရေ မင်းတို့ အားလုံးကိုငါပြောချင်တာက မင်းတို့ အမှန်ကို အမှန်တိုင်း အရှိက်ို အရှိတိုင်း သိမြင်ကြပါ.....
ယခုမင်းတို့ ဖတ်နေရတဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းများအားလုံးကို အမှားအယွင်းများစွာကို မင်းတို့ သိမြင်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာ
စွန့်လွှတ်ကြပါ... ဂေါတာမ နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဟု ဘယ်သူက ဆိုထားလဲ ဂေါတာမ ကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရားများကို ဟောနေသောလည်း သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဟု ဘာနဲ့ သက်သေခံမလဲ????ဘယ်သူက နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖူးလို့ တွေ့လိုက်လို့ သူကို နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ ပြောနိူင်ရတာလဲ.. သူသေပြီးလို့ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀)လောက်မှာ ဒီဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းများကို စတင်ပြုစုတာပါ.. ဒါကို မင်း ဝီကီ wiki ထဲမှာ ရှာလို့ရပါတယ်.. ငါတော့ လူလူချင်းကိုးကွယ်နေရသော ဘာသာကို အမုန်းဆုံးပါ။ ပို၍ မုန်းတာက အကိုးကွယ်ခံတဲ့ လူလိမ်များကို အမုန်းဆုံးပါ... မင်းတို့ကို အကြံပေးချင်တာက မင်းတို့ လူလူချင်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုလည်း သိပ္ပံပညာရှင်ပဲ ထိုင်ကန်တော်လိုက်တော့ သိပ္ပံပညာရှင်များက မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးဂတုံးများထက် အစွမ်း၇ှိတယ်. တွေ့သမျှဘာသာကို
သူလက်အောက်ခံဘာသာ သူဆီက ခိုးချတာ .. အဲ့ဒီဂတုံးဘုန်းကြီးတွေ က ဘာနဲ့တူလည်း ဆို အောက်ကလည်း နေသေး ကြောက်ပြီးလား ကြောက်ပြီးလားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ဟေ့ကောင် ပီတာကျော် မင်းလည်း ပညာတတ်ပါတယ်... ဒီဝတ်ရုံ တခုဝတ်လိုက်ရုံနဲ့ သူဘဝက ကောင်းသွားရောလား သူက ကိုးကွယ်ခံထိုက်သွားရောလား မြေကြီးပေါ်မှာ အပြစ်ကင်းလွှတ်၍ ကျင့်နိူင်သော သူတောင်ကောင်း တစုံတယောက်မှ မရှိတဲ့ မင်းတို့ဘာသာကို မင်းစဉ်းစားပါ.... လူထုံလူအတို့သည် တောမှ သစ်အားခုတ်၍ ဤသစ်နဲ့ ပင် မီးမွေးတယ်.... ဤသစ်နဲ့ပင် အရုပ်အား လုပ်၍ ကယ်ပါဘုရားဟု ဆိုကြတယ်တဲ့ မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ... ကလေးကစားစရာ သဖွယ်အရုပ်ကို မင်းတို့ကိုးကွယ်တာ ငါတို့တော့ ရီမိတယ်ကွာ အဲ့ဒီအရုပ်ကို ငါထုခြေလည်း ပျက်စီးမှပဲ ငါထားတဲ့နေရာမှနေရမှ အရုပ်ကွ ဒါကို မင်းတို့က တမျောတသနဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကိုးကွယ်နေကြတယ်... မင်းတို့ဥာဏ်ရည်ပဲ မမှီတာလား ငါသေချာပြောနိူင်တာကတော့ မင်းတို့က သင်ပေးရင်လည်း တတ်နိူင်တာပဲ .. ဥာဏ်ရည်မမှီတာမဖြစ်နိူင် မင်း၇ဲ့ငယ်စဉ်ထဲက မှားယွင်းစာ သွန်သင်မူအောက်မှာ
နေထိုင်ရလို့ပဲ မင်းတို့ brain ဆေးခံရတယ်လို့ ငါပြောနိူင်တယ် ဒီလိုပြောလို့ မင်းတို့အားလုံးသင်ကြားခံနေရတာ
အားလုံးမှားယွင်းတယ်လို့ ငါဆိုတာမဟုတ်ပါ.. ဘာသာတရားရဲ့ မှားယွင်းမူကိုသာ ဆိုချင်းဖြစ်ပါတယ်။ မင်းစဉ်းစား သူကကော ဘာစွမ်းလို့လဲ သူကကော ဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲ ညနေထမင်းတနပ်မစားတာနဲ့ သူ့ကို ကိုးကွယ်ရမှာလား မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေထက် အဆတရာမက
သာအောင် ကျင့်နိုင်တဲ့ သူတွေ ဘာသာရပ်တိုင်းမှာ ၇ှိတယ်..... တချိုဆိုကျင့်နိူင်ရုံတောင် မကဘူး အစွမ်းပါထက်ကြတယ်... ဘာသာစကားကို (၅)မျိုး (၆)မျိုးလောက်ကို ပြောနိူင်တယ်..... သိပံ္ပအတတ်မှာဆိုလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိူင်တယ်... မှန်ကန်သော ဘုရားကို မင်းတို့ ရှာတွေ့နိူင်ကြပါစေ။ လူလူချင်း ကိုးကွယ်သောအမူမှ ကင်းဝေးကြပါစေ မွတ်စလင်ကိုကြတော့ လူသတ်တဲ့ဘာသာ ခရစ်ယာန်ကြတော့ ငါတို့ဆီက ခိုးချထားတာ ဒီလိုမဟုတ်မဟက်တဲ့ စကားတွေနဲ့ လူတွေကိုစည်းရုံးနေတာ မဟုတ်လား ?????နောက်မြန်မာဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေ တချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာတယ်လို့ ပို့စ် တင်ကြတယ် အဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ၁နှစ်တောင်မခံ ဘူး နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်သွားကြတယ်.... အဲဒီအကြောင်းကြတော့ မတင်တော့ဘူး ဘာလို့မတင်လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်လွှတ်သွားကြမှာ ကြောက်လို့မလား တချို့ သူတို့က ယောဂီတရားထိုင်တယ် ဒါနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီး
ပြောကြတယ်. ယောဂီတရားထိုင်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာအကျင့်လား ဟိန္ဒူတွေရဲ့ အကျင့်လား
မင်းဗုဒ္ဓဂေါတာမ မမွေးခင်ကတည်းက ဒီယောဂီအကျင့်က အများဆိုင် အကျင့်ဖြစ်နေပဲါပြီး ယခုလည်း လူတွေ က
ကျန်းမာရေး ရှူထောင်ကနေ ယောဂီတရားထိုင်တာကို ကျင့်သုံးလာတယ် ဒါပေမဲ့ ဂေါတာမစတီထွင်တဲ့
အကျင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မင်းတို့ သဘောပေါက်သင့်တယ်.. ဒီိလိုပြောလို့ ငါတော့ မလုပ်ပါဘူး လုပ်မိရင် မင်းတို့က မင်းတို့ဆီက ခိုးချတယ်လို့ ပြောအုံးမယ်။ မင်းတိုဘုန်းကြီးတွေ့ရဲ့ ဖာသယ်ပါးစပ်ကိုတော့ ငါကြောက်တယ်....
Posted by messenger at 8:27 PM